Ihe onyonyo zuru oke nke ụnyaahụ dị ugbu a na weebụsaịtị Apple | Esi m mac
Ihe onyonyo zuru oke nke ụnyaahụ dị ugbu a na weebụsaịtị Apple
Nyaahụ Apple nwere otu n'ime nzukọ a na-atụ anya ya n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke asịrị metụtara ya na nke na-ezo aka n'ọtụtụ ihe omume, ihe omume ndị metụtaraghị na ngosipụta sọftụwia Apple na-ahụkarị. Na mgbakwunye na ozi niile sitere na aka nke sistemụ arụmọrụ niile, Apple gosipụtara 10,5 nke anụ ọhịa ahụ iPad Pro, ihe atụ na-abịa n'ahịa iji dochie 9,7-inch iPad Pro. O gosikwara HomePod, ọkà okwu a na-ebugharị ebugharị nke nwere ọrụ yiri nke Google Home na Amazon's na-enye.
N’emegide nsogbu niile, Apple emegharịghị iMac, mana o gosipụtara iMac Pro, ihe ngosi Pro nke na-enye anyị eserese na ike nhazi dị egwu, yana ọnụahịa mmalite ya. MacBook Pro malitere ihe na-erughị otu afọ gara aga na iMac ka emekwara ka ọ dị ọhụrụ, na-akwadebe ha ọgbọ ọhụrụ nke ọgbọ Intel Intel Kaby Lake.
Isi Okwu, adịla ogologo karịa awa abụọ, dị ugbu a na ibe Apple site na njikọ ndị a, otu isi okwu nke na ọ dịghị mgbe ọ bụla dị arọ, ebe ọ bụ na ụmụ okorobịa si Cupertino tụrụ ọtụtụ oge ekenyela na nkwupụta ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnweta isi okwu a na ndị gara aga niile ma ọ bụ ndị emere na ụbọchị ndị a niile, Apple na-eme ngwa WWDC maka ndị ọrụ iOS, ngwa ezubere maka ndị mmepe ka ha nwee ike iru ebe obibi na mgbakwunye na ịnweta niile. vidiyo ndị e dere mgbe ha na-eme.
Abọchị ole na ole, Apple ga-akwụkwa isi ihe ọhụrụ a na ọwa YouTube, ebe a na-ekokwasịkwa vidio niile nke ụdị ihe omume a, yana mgbasa ozi niile ọ na-ebupụta na ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ihe onyonyo zuru oke nke ụnyaahụ dị ugbu a na weebụsaịtị Apple
Nchịkọta ọhụrụ nke ndị agha oge okpomọkụ nke Apple Watch
Apple na-agbasawanye usoro mmemme ọha na eze na tvOS